Soo saaraha Iftiinka LED ilaa 2004 | Iftiinka LEDIA
LEDIA waxa ay siisay alaab qiimo sare leh shuraakadeena sharafta leh ee aduunka oo dhan.
Iftiinka Gudaha ee Led
Uumiga Cidhiidhiga ah
Iftiinka Dibadda ee Led
Laydhka Led Strip
Silikoon Strip Led
Led Joogta ah
Iftiin joogto ah
Hudheelada & Goobaha laga dukaameysto
Jiimka & Madadaalada
Maktabadda & Matxafyada
Suunka khafiifka ah
Alaabta sifaysan ama walxo cusub
LEDIA waxay siisay alaabo tayo sare leh shuraakadayada sharafta leh ee aduunka oo dhan,
dhamaantood waa u qalma DLC/UL/ETL/TUV/SAA/CE/ENEC
Codsiyada Iftiinka Dibadda
Xidhiidhka wada shaqayneed ee dhaw ee lala leeyahay macmiisha waxa ay u sahlaysaa kooxdayada in ay bixiyaan adeeg badheedh ah oo aan midna ahayn.
Codsiyada Iftiinka Gudaha
Kooxdayada naqshadaynta ee u heellan iyo kooxda wax-soo-saarka ayaa awood u leh inay bixiyaan xal wax-ka-beddel ah oo ku habboon.
Codsiyada Iftiinka Dhismaha
Ku saabsan LEDIA
La aasaasay 2004, LEDIA waa shirkad tignoolajiyada sare ee Gobolka. Waxay ku taal Degmada Huadu (oo u dhow Guangzhou Baiyun International Airport), waana qayb hoos timaada Kooxda Honglitronic. Sannado badan oo horumarineed ka dib, LEDIA oo aasaasay sumcad wanaagsan labadaba gudaha iyo dibaddaba, waxay noqotay shirkadda ugu horreysa ee warshadaha iftiinka tooska ah. Joogitaanka shirkadda, kartida iyo hal-abuurka ayaa fure u ah halka tayada ay tahay halbowlaha nolosha.
LEDIA waxay leedahay shaybaarada shaybaadhka CNAS ee heer gobol, iyada oo hubinaysa in dhammaan alaabooyinka ay maraan imtixaannada la xidhiidha ka hor inta aan suuqa la aadin. Alaabooyinka aan soo saarno oo ay ku jiraan nalka LED-ka ee nalka, PVC / silikoon nalka, iftiinka golaha iyo nalalka kale ee dhammaan la helay shahaadada Shiinaha CCC, shahaadada US UL / ETL, EU CE, ROHS, TUV iyo Australia SAA, DLC, aqoonsiga ENEC, si loo dammaanad qaado kalsoonida macaamiisha ee alaabtayada. U iftiimi adduunka alaabada iftiinka tooska ah waa waxa LEDIA raacdo mar walba.
AragtidaNoqo ganacsi heer sare ah oo ku yaal berrinkii nalalka LED ee Shiinaha.
Hawlgalka-Abuur qiimaha iftiinka ee sayniska iyo tignoolajiyada, oo ku dadaal inaad fuliso riyada kooxda.
Waxa ugu horreeya ee aan samayno waa la kulanka macaamiisheena oo aan ka hadalno ujeedooyinkooda mashruuca mustaqbalka.
Inta lagu jiro kulankaan, xor u noqo inaad gudbiso fikradahaaga oo weydii su'aalo badan.
LEDIA waxay siisay alaabo tayo sare leh shuraakadayada sharafta leh ee aduunka oo dhan, oo ay ku jiraan iftiinka banaanka LED, iftiinka warshadaha LED, nalka ganacsiga LED iyo iftiinka qurxinta LED
Qofka lala xidhiidhayo: Sunny Sun
Cinwaanka: No.1 Xianke 1st Road, Huadong Town, Huadu Dist, Guangzhou, Shiinaha